AC firita capacitor, AKMJ-S,
CRE yakagadzira iyi yakaoma mhando firimu AC firita iyo yakagadzirisa yakajairwa AC firita dambudziko rekutadza.
1. hombe simbi kesi
2. yakakwirira yakatarwa simba
3. wave yakatemwa metallized PP firimu / PU iyo inovimbisa yakaderera kuzvidzora inductance, yakakwira kuputika kuramba uye yakakwirira kuvimbika.
4. CRE renji ye AC firita capacitor yakashandiswa yakachengeteka uye yakavimbika inodzorwa yega-yekurapa tekinoroji inoita akateedzana aya kunyanya akanakira magetsi ekushandura mukutenderera, madhiraivha, simba rinowedzerwazve, nzvimbo dzekufambisa magetsi, simba remagetsi, uye mashandisiro eUPS, nezvimwe.
DC chinongedzo capacitor DMJ-PS
Muenzaniso weCapacitor: DMJ-PS Series
1. Capacitance renji: 8-150uf;
2. Voltange renji: 450-1300V;
3. Kupisa: kusvika ku105 ℃;
4. Yakadzika kwazvo dissipation factor;
5. Yakanyanya kukwirisa kupokana;
6. Isiri-polar kuvaka;
7. Kuisa pcbc, 2-pini, 4-pini, 6-pini terminal vhezheni sarudzo
AC firita (AKMJ-PS akateedzana)
Humidity Kusimba Kwemabvunzo Bvunzo Nyorova Nyika, Yakadzikama Nyika paRated Voltage.
CRE AC firimu capacitor inokwanisa kunyatso chengeta simba rinowedzerwazve, kunyangwe munzvimbo yakanyanyisa yekushandisa
Yakaoma firimu capacitor yemagetsi emagetsi
AKMJ-PS capacitor inokwanisa kunyatso chengeta simba rinowedzerwazve, kunyangwe munzvimbo yakanyanyisa yekushandisa.
Yakakwira simba capacitor DKMJ-S akateedzana
1. Inoshanda tembiricha renji: +70 kusvika -45 ℃
2. Capacitance renji: 100uf - 20000uf
3. Rated voltage: 600VDC-4000VDC
5. Hupenyu: 100000 maawa
6. Referensi: standard: IEC61071, IEC61881, ISO9001
DC chinongedzo capacitor: DMJ-PC
Yakakwira simba metallized polypropylene capacitors ndizvo zvinosarudzika kune akawanda akawanda DC Filter, simba rekuchengetedza uye zvakafanana zvinoshandiswa zvemagetsi emagetsi.
DC chinongedzo capacitor DMJ-MT
Muenzaniso weCapacitor: DMJ-MT Series
1. Capacitance renji: 10-100uf;
2. Voltange renji: 350-1100V;
3. Kupisa: kusvika 85 ℃;
Metallized polypropylene firimu capacitor yemagetsi magetsi & kutendeuka
Yakakwira crystalline segmented metallized polypropylene capacitors ndicho chikamu chesarudzo kune akawanda akawanda DC Filter, simba rekuchengetedza uye zvakafanana zvinoshandiswa kwezana ramakumi maviri nemasere.
Muenzaniso weCapacitor: DMJ-MC Series
Iine chiyero chemagetsi kubva pa450 kusvika ku4000 VDC uye capacitance kubva pa50-4000 UF, DMJ-MC capacitor yakagadzirirwa nemhangura nzungu uye chivharo chepurasitiki chekuvhara. Iyo yakarongedzwa mualuminium cylinder uye yakazadzwa neakaoma resin. Yakakura capacitance mudiki saizi, DMJ-MC capacitor inogona kuiswa nyore.
DMJ-MC inogadziriswa firimu capacitor paCRE ine makwikwi ekukwikwidzana pamusoro pechinyakare electrolytic capacitor mumagetsi ekushandura uye maanverter nekuda kwehukuru hwayo hushoma, kuwanda kwesimba, kusimba kwemagetsi akakwirira, kurarama kwenguva yakareba, mutengo wakaderera wekugadzira uye kugona kwakasiyana-kwega kwekupora.
Firimu capacitor yakagadzirirwa defibrillators DMJ-PC akateedzana
Defibrillator firimu ma capacitor akagadzirwa chaizvo kuti asangane nekuvimbika kunodiwa kweye Class III yekurapa mudziyo.
1. Capacitance Range: 32µF kusvika 500 µF
2. Capacitance Kushivirira: ± 5% Standard
3. DC Voltage Range: 800 VDC kusvika 6000 VDC
4. Kushanda tembiricha renji: +70 kusvika -45 ℃
6. Hupenyu: 100000 maawa
7. Chirevo: chiyero: IEC61071, IEC61881
Yakakwira-Kubudirira Resonant Yakagadziriswa Capacitor
Iwo RMJ-MT Series capacitors akagadzirirwa akakwirira magetsi resonance wedunhu uye anoshandisa yakaderera kurasikirwa dielectric yepolypropylene firimu.
Iyo ndiyo yakaderera yakaderera voltage, yakakwira frequency, AC resonant capacitor mhinduro.
6. Referensi: standard: IEC61071, IEC61881